Imidlalo yabaphila nokukhubazeka eThekwini | News24
Imidlalo yabaphila nokukhubazeka eThekwini
UMA ukwazi ukuyiphupha into noma ukuyicabanga leyo nto, kusho ukuthi ungakwazi ukuyenza. Phecelezi: If you can dream it you can do it.
Izikole zabantwana abaphila nokukhubazeka kuyoyonke iKwaZulu-Natal zizotshengisa izwe ukuthi nazo azizincinyane futhi ziyakwazi ukuzenzela cishe zonke izinto.
Lezi zikole eziyipesheli ekufundiseni lama qhawe esizwe nabaphila nokukhubazeka okuthile nokundlela ziningi zizobe ziqhudelana futhi zikhiphana inkani emidlalweni yazo nekubhekeke ukuthi ihehe izinkulungwane zababukeli.
Le midlali ihlanganiswe futhi yagqugquzelwa inhlangano eyizishovushovu kulolu hlobo lwemidlalo eyaziwa ngokuthi i-The Agape Love Sports.
Kanti le midlalo ixhaswe futhi yasekwa yiKwaZulu-Natal Department of Sports and Recreation.
Le midlalo ebizwa ngokuthi yi-The Agape Love Sport, Culture and Recreation Festival izobe ingomhlaka September 26 kwelikaBhanana, eThekwini phela ezinkundleni iHoy Park kusuka ngo-9:30 ekuseni kuya ku-4 ntambama.
Le midlalo ibalulekile kakhulu kuwonkewonke ngoba phela iqwashisa iningi ngokubaluleka nokuphila ngokuzivocavoca nokuhlala udlala.
Kule minyaka ukuhlala ngokudlala kanye nokuzivocavoca akusafanele kuthathwe njengokuqhudelana noma ukuwina okuthile kodwa sekuthathwa njengesitayela sokuphila nesibalulekile ukugcina umzimba uphile kahle.
Okubalulekile nangale midlalo ukuba ikwazi ukutshengisa ukuthi osisi nobhuti kanye nabantwana bethu abakhubazekile nabo bayakwazi ukwenza noma yini futhi abathintwa noma bayazifela ngezemidlalo kanti futhi bayakwazi nokucabanga.
Le midlali izobe igubha iminyaka emine yasungulwa, kanti isithathwa nanjengomcimbi omkhulukazi lapho kudlalwa cishe zonke izinhlobo zemidlalo ongazicabanga
Eminye yale midlalo ekubhekeke ukuthi kuqhudelwane ngayo yibhola lezinyawo, ibasketball, netball, ezokusubatha kanye neminye.
Isikhulumi sale midlalo uPhindile Makhaphela uthe: “Imidlalo enjengalela ichaza noma ibalulekile ukuqiniseka ukuthi abanye bethu abakhubazekile ngezindlela eziningi ukuthi nabo bakwazi ukujoyina amakilabhu ezemidlalo ukuze badlale imidlalo ehlukahlukene.
Imidlalo enjena iphinde ivumele noma ihlanganise bonke abantwana noma abantu abakhubazekile ngezindlela ezahlukene ithuba lokudlala ndawonye nokuthi bazane ukuthi bakhona nabanye abaphila njengabo.
Futhi-ke lemidlalo inikeza lokutshengisa amakhono ahlukene kwezemidlalo.”
Kanti omunye wothisha, uLindiwe Mvubu, ofundisa eNingizimu Special School uthe le midlalo iyangokukhula yonke iminyaka futhi isiheha izihlwele ngezihlwele ngenxa yobumnandi bayo nangendlela etshengisa ngayo amakhono namathalente